जाडो जाडो | नेटवर्क मौसम विज्ञान
पृथ्वी ग्रह हाम्रो तारा, सूर्य को वरिपरि जान्छ। यसको चालको साथ यो यो अलग अलग दूरी को माध्यम बाट यसलाई सम्मान। जब यो पुग्छ शीतकालीनक्रान्ति यो सहमत छ कि यो सबैभन्दा छोटो दिन र उत्तरी गोलार्द्धको सबैभन्दा लामो र दक्षिण गोलार्धको विपरित रात हो। यो दिन सामान्यतया हो डिसेम्बर २१
जाडोमा संक्रांति एक कुञ्जी घटना हो जुन प्राकृतिक र खगोलीय चक्रमा परिवर्तनलाई चिह्नित गर्दछ। जाडो अस्थिरताबाट शुरू गरेर, उत्तरी गोलार्द्धमा रातहरू बिस्तारै जूनको ग्रीष्म संक्रान्ति सम्म छोटो हुन थाल्छ।
1 जाडो अक्रान्तमा के हुन्छ?
2 जाडोमा संक्रान्ति र संस्कृति
2.1 गोसेकको सर्कल
2.2 स्टोनहेन्ज, ग्रेट ब्रिटेन
2.3 न्यूग्रान्ज, आयरल्यान्ड
2.4 टुलम, मेक्सिको
3 किन जाडो साल्टिस्टाईस मिति वर्ष बर्ष परिवर्तन हुन्छ?
4 जाडोमा संक्रान्ति र मौसम परिवर्तन
जाडो अक्रान्तमा के हुन्छ?
ग्रह पृथ्वी आफ्नो मार्गको एक बिन्दुमा पुग्छ जहाँ सूर्यको किरणहरूले सतहलाई उस्तै गरी प्रहार गर्दछ बढी तिरछा यो हुन्छ किनकि पृथ्वी अधिक झुकाव हो र सूर्यको किरणहरू सापेक्ष रूपमा ठाडो रूपमा आउँछन्। यो कारण गर्दछ घामको कम घण्टा, यो बर्षको सब भन्दा छोटो दिन बनाउँदै।
पृथ्वीमा सूर्यको दूरीका अनुसार हिउँद र गर्मीको बारेमा सामान्यतया समाजमा नराम्रो धारणा छ। ग्रीष्म itतुमा यो तातो छ किनकि पृथ्वी सूर्यसँग नजिक छ र जाडोमा यो चिसो छ किनकि हामी अझै टाढा फेला पार्दछौं। सूर्यको वरपर पृथ्वीको मार्गलाई अनुवादको रूपमा चिनिन्छ। वसन्त winterतु र जाडो इक्विनोक्सहरूमा पृथ्वी र सूर्य हुन् उही दूरी र उही झुकावमा। यद्यपि लोकप्रिय धारणाको विपरित, पृथ्वी हिउँदमा सूर्यको नजिक छ र गर्मीमा पनि टाढा छ। त्यसोभए हामी कसरी जाडोमा चिसो हुने गर्छौं त?
सूर्यको सम्बन्धमा पृथ्वीको स्थान भन्दा बढी, ग्रहको तापक्रमलाई के प्रभावित गर्दछ झुकाव सूर्य किरणहरु को साथ सतह मा हिट जो संग। जाडोमा, संक्रान्तमा, पृथ्वी सूर्यको नजिक छ, तर यसको झुकाव उत्तरी गोलार्धमा सब भन्दा माथि छ। यस कारणले गर्दा जब किरणहरू पृथ्वीको सतहमा पनि झुकावमा पुग्छन्, दिन छोटो छ र ती पनि कमजोर छन्, त्यसैले तिनीहरूले हावालाई यति धेरै तातो गर्दैनन् र यो चिसो छ। दक्षिणी गोलार्द्धमा यसको विपरित हुन्छ। किरणहरूले पृथ्वीको सतहलाई अधिक लंबवत र सीधा हिट गरे जसले गर्दा उनीहरूको लागि, डिसेम्बर २१ मा गर्मी सुरु हुन्छ। सूर्यको सम्बन्धमा पृथ्वीको यो अवस्थालाई भनिन्छ पेरिहेलियन।
पेरीहेलियन र एफेलीयन। पृथ्वी कक्षा।
अर्कोतर्फ, ग्रीष्म inतुमा, पृथ्वी यसको सम्पूर्ण पथमा सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा छ। यद्यपि, उत्तरी गोलार्धमा झुकावले सूर्यको किरण उत्तरी गोलार्धमा अधिक लम्ब बनाउँछ र त्यसैले यो तातो छ र दिनहरू लामो छ। सूर्यको सम्बन्धमा पृथ्वीको यो अवस्थालाई भनिन्छ अपेलियन।
जाडोमा संक्रान्ति र संस्कृति
इतिहास भर मा, मानव जाडो को संक्रान्ति मनाईएको छ। केही संस्कृतिहरूका लागि, यस सालको सुरूवात डिसेम्बर २१ हो, जुन जाडोको सुरुसँग मिल्छ। केही इण्डो-यूरोपीय जनजातिहरूले पनि यस दिनलाई उत्सव र रीतिथितिहरू मनाउँथे। रोमीहरूले उत्सव मनाए Saturnalia, समलि god्गी भगवानको सम्मानमा, र त्यसपछिका दिनहरूमा उनीहरूले श्रद्धांजलि अर्पण गरे मिथ्रा, फारसबाट विरासतमा आएको प्रकाशको देवताको सम्मानमा।
पुरानो परम्पराको लागि, जाडो अक्रान्तले अँध्यारोको बिरूद्ध प्रकाशको विजय प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो उत्सुकताको कुरा हो कि जब त्यहाँ जाडोमा कम घण्टा प्रकाश हुन्छ। जे होस्, यो यस्तो छ किनकि जाडो अक्रान्तबाट रातहरू छोटो र छोटो हुँदै गइरहेका हुनेछन्। दिनले रातलाई जित्नेछ।
जाडोमा संक्रान्तिले थुप्रै मूर्तिपूजक चाडहरू र संस्कारहरूलाई पनि जन्म दिन्छ। डिसेम्बर २१ मा मनाइएको थियो Stonehenge चिसो हिउँदको एकाकीपनको सूर्य यस स्मारकको सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण ढुocks्गासँग प al्क्तिबद्ध गर्दछ। आज ग्वाटेमालामा, जाडो अक्रान्त अझै पनि अनुष्ठानको माध्यमबाट मनाइन्छ "उडानकर्ताहरूको नाच"। यस नृत्यमा धेरै व्यक्ति घुम्छन् र एक खम्बाको वरिपरि नाचिरहेका छन्।
यो सर्कल जर्मनीमा सक्सोनी-एन्हाल्टमा अवस्थित छ। यो केन्द्रित रि .्ग को एक श्रृंखला बाट जमीन मा कीला लगाईन्छ। पुरातत्वविद्हरू र यसको वरपरका इतिहासकारहरूका अनुसार यो अनुमान गरिएको छ ,7.000००० वर्ष पुरानो र यो धार्मिक रीतिथिति र बलिदानहरूको दृश्य थियो। जब तिनीहरूले यसलाई पत्ता लगाए, तिनीहरूले बुझे कि बाहिरी घेरामा दुईवटा ढोका छन् जुन जाडोको विलापका साथ संरेखित थिए। त्यसकारण यसले सुझाव दिन्छ कि यसको निर्माण बर्षको यस मितिमा एक प्रकारको श्रद्धांजलिको कारण हो।
स्टोनहेन्ज, ग्रेट ब्रिटेन
हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं, जाडोमा संक्रान्ति पनि स्टोनहेंजमा मनाईन्थ्यो कि सूर्यको किरण बीचको वेदी र बलिदानको ढु stone्गासँग मिल्दछ भन्ने तथ्यलाई धन्यवाद दिन्छ। यो स्मारकको बारेमा छ Years,००० वर्ष पुरानो र यो विश्वका अधिकांश भागहरूमा परिचित छ, जुन सयौं बर्षहरूमा अनुष्ठान र खगोलशास्त्रीय अवलोकनको एक महत्त्वपूर्ण दृश्य हो।
त्यहाँ एक टीले बनेको छ 5.000 वर्ष पहिले घाँसले ढाकेको र आयरल्याण्डको उत्तर पूर्वमा सुरुnel र नहरहरू द्वारा लाइन लगाइएको। केवल जाडोको संक्रान्तिको दिनमा मात्र सूर्यले सबै मुख्य कोठामा प्रवेश गर्दछ, जुन केही विज्ञहरूको भनाइ अनुसार यस मितिलाई मनाउन संरचना निर्माण गरिएको हो भनेर संकेत गर्दछ।
मेक्सिकोको पूर्वी तटमा, युकाटन प्रायद्वीपमा, तुलम पुरानो पर्खाल भएको शहर हो जुन म्यानको हो। त्यहाँ बनेको कुनै एक भवनको शीर्षमा प्वाल छ जुन जाडो र ग्रीष्म स sol्क्रमित दिनको साथ पign्क्तिबद्ध हुँदा भव्य प्रभाव पार्दछ। यो भवन स्प्यानिशको आगमनसँगै म्यान जनस fell्ख्या नबढुन्जेलसम्म यस भवनलाई अक्षुण्ण बनायो।
किन जाडो साल्टिस्टाईस मिति वर्ष बर्ष परिवर्तन हुन्छ?
हिउँद सुरु हुने दिन बिभिन्न मितिहरूमा देखा पर्न सक्छ, तर सधैं उही दिनहरू। चार मितिहरू जुन यो हुन सक्छ बीचको बीचमा हो डिसेम्बर २० र २,, दुवै समावेशी। यो हाम्रो पछाडि क्यालेन्डरको अनुसार वर्ष अनुक्रम फिट हुने तरीकाले हो। यो वर्ष लीप वर्ष हो कि होइन भन्नेमा निर्भर गर्दछ र सूर्यको वरिपरि पृथ्वीको प्रत्येक कक्षाको अवधिमा निर्भर गर्दछ। जब पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि क्रान्ति गर्छ भने यो उष्णकटिबंधीय वर्षको रूपमा चिनिन्छ।
हाम्रो २१ औं शताब्दी भर, जाडो दिनहरु मा शुरू हुनेछ डिसेम्बर २० देखि २२ सम्म।
जाडोमा संक्रान्ति र मौसम परिवर्तन
पृथ्वीको कक्षाको प्राकृतिक बदलाव, सम्बन्धित सहित precession, redistribute, लामो समय अवधिमा, घटना पृथ्वीको सतहमा सौर विकिरण।
प्रिसेसन वा ग्राउन्ड रोल स्पिनि top शीर्ष गति हो जुन पृथ्वीको अक्षले बनाउछ। अक्ष अन्तरिक्ष मा काल्पनिक सर्कल वर्णन र एक क्रान्ति पत्ता लगाउँछ प्रत्येक years बर्ष। यसको ग्लोबल वार्मिंग र मौसम परिवर्तनसँग के गर्नुपर्दछ?
पृथ्वीको Precession। स्रोत :: http://www.teinteresasaber.com/2011/04/cuales-son-los-movimientos-de-la-tierra.html
विगत दस लाख बर्षमा पृथ्वीको अक्षमा भएका यी सूक्ष्म भिन्नताहरूले वायुमण्डलीय सांद्रतामा ठूलो ह्रास र वृद्धि भएको छ। मीथेन र कार्बन डाइअक्साइड। ग्रीन हाउस ग्यासको सांद्रता मुख्य रूपमा बोरियल गोलार्ध ग्रीष्म duringतुमा भिन्नतालाई जवाफ दिनका लागि परिचित छ, जुन वर्षको उत्तरी ध्रुवले सूर्यलाई औंल्याउँछ।
उत्तरी गोलार्धमा ग्रीष्म ताप त प्रत्येक २२००० वर्षमा एक पटकसम्म पुग्छ, जब उत्तरी ग्रीष्म theतु सूर्यको नजिकको बिन्दुबाट पृथ्वीको पारसँग मिल्छ र उत्तरी गोलार्धले अत्यन्त तीव्र सौर विकिरण पाउँछ।
यसको विपरीत, गर्मी गर्मी पुग्छ यसको न्यूनतम ११,००० वर्ष पछिएक पटक, पृथ्वीको अक्ष विपरीत दिशामा परिवर्तन भयो। उत्तरी गोलार्धमा त्यसपछि न्यूनतम गर्मी सौर विकिरण हुनेछ किनभने पृथ्वी स्थितिमा छ सूर्यबाट टाढा।
मीथेन र कार्बन डाइअक्साइड सांद्रता बढेको र ग्रह पृथ्वी भर मा घटना सौर विकिरण मा परिवर्तन संग समन्वय मा पछिल्लो 250.000 वर्ष।
जाडोमा संक्रान्तमा सूर्यको किरणहरूले कडा हडताल गर्दछ।
प्रत्येक ११,००० बर्षमा त्यहाँ एक जाडो अक्रान्त छ तातो उत्तरी गोलार्द्धमा घटना सौर विकिरण बढी भएकोले यसको विपरित, त्यहाँ परम्पराको गोद पूरा गर्दा अर्को जाडोमा संक्रान्ति हुन्छ, जुन हो चिसो सूर्यको किरणहरु अधिक झुकाव भित्र आए पछि। भनिन्छ कि हरितगृह ग्यासको सांद्रता स्वाभाविक रूपले बढ्दैछ किनकि हामी त्यस्तो प्रसेसनको समय नजिकै छौं जुन ग्रहले बढी सौर्य विकिरण प्राप्त गर्छ, तर हामीलाई राम्ररी थाहा छ, स्वाभाविक रूपमा, यो त्यति बढ्ने छैन। यो मानव गतिविधिहरूको कारण हो कि विश्वव्यापी औसत तापमान यति तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ।
यी सबैको साथ तपाईं विश्वको संस्कृतिहरूमा र इतिहासभरि जाडो अक्रान्ति र यसको सान्दर्भिकताका बारे थोरै जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » शीतकालीनक्रान्ति
केही प्रजातिहरू जलवायु परिवर्तनबाट बढी खतरामा छन्
के सुपरमूनले सुनामीको कारण दिन्छ?